Ururka Al-shabaab oo Sheegtay Masuuliyadda Dilka Maareeyihii Shirkadda DP World u Qaabilsannaa Dekedda Boosaaso | Dhamays Media Group
Boosaaso (Dhamays News) – Ururka Al-shabaab, ayaa sheegtay inay masuul ka yihiin dilkii lagu khaarajiyey Maareeyihii dekedda Boosaaso ee maamul-goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland uga masuulka ahaa Shirkadda la yidhaahdo P&O Ports oo hoostagta Shirkadda DP WORLD.Sida ay xaqiijiyeen Maamulka Puntland, nin hubaysan ayaa toogtay Mr. Paul Anthony Formosa oo gacanta ku hayey maamulka Dekedda Boosaaso shalay, iyadoo sidoo kale gacanta lagu hayo ninka falkaas gaystay oo dhaawac ah, waxayna arrintaas muujinaysaa heerka amni-xumo ee ka jirta degaannada maamulka Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya.
“Nin hubaysan ayaa toogtay oo dilay Mr. Paul Anthony Formosa, kaasoo ahaa maareeyaha mashruuca dhismaha dekedda Boosaaso ee ay gacanta ku hayso Shirkadda DP WOLRD. Waxaanna lagu dilay gudaha xayn-daabka Dekedda, waxayna Hay’adaha Ammaanku ku guulaysteen inay toogtaan ninka falkaas fuliyey.” Sidaa waxa yidhi sarkaal lagu magacaabo Maxamed Daahir oo ka mid ah masuuliyiinta Ammaanka ee Maamulka Puntland.
Dhinaca kale, Dowladda Imaaraadka Carabta, ayaa xaqiijisay dilka loo gaystay sarkaalka u shaqaynayey Shirkadda DP WOLRD, iyadoo qoraal lagu faafiyey Twitter-ka lagu shaaciyey in baadhis lagu hayo qaabka falku u dhacay.
“Waxa kaloo halkaas lagu dhaawacay saddex qof oo ka mid ah hawlwadeennada, kuwaasoo dhammaantoodba hadda laga dawaynayo dhaawacyada gaadhay,” ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay Xukuumadda Dubai shalay.
Ururka Al-shabaab, ayaa isla markiiba sheegtay masuuliyadda weerarka ka dhacay gudaha dekedda magaalada Boosaaso, waxayna masuuliyiinta maamulka Puntland oo uu ugu horeeyo Madaxweynaha cusub ee dhawaan loo doortay Puntland ay ku hanjabeen inay tallaabo adag ka qaadi doonaan cid kasta oo lagu caddeeyo inay lug ku lahayd dilka loo gaystay sarkaalka ka tirsanaa Shirkadda DP WORLD.
Mr. Paul Anthony Farmosa oo u dhashay dalka Malta ayaa waxaa uu dhashay sannadkii 1966-kii, isagoo wax ku soo bartay gudaha dalka Malta oo uu u dhashay. Waxaa uu bartiisa LinkedIn uu ku qoray in uu bartay maareynta dekeddaha.
Sannadihii 2013-ka ilaa iyo 2016 waxaa uu ka soo shaqeeyay dekeddaha dalka Sudan, halkaasi oo uu ka ahaa maareeye-ku-xigeen, waxaana sidoo kale uu ka soo shaqeeyay dalal ay ka mid yihiin Moroco, Imaaraadka Carabta.
Paul ayaa sidoo kale ahaa tababare arrimaha dekeddaha iyo maamule aqoon durugsan u lahaa howlaha dekedaha.
Intii u dhexeesay bilihii January ilaa iyo July ee sannadkii 2017-ka, waxaa uu sheegay in uu kasoo shaqeeyay dalka Guinea, wixii intaa ka dambeeyay na waxaa uu bishii Agoost ee sannadkii 2017-ka uu ka shaqo bilaabay magaalada Bosaaso ee Soomaaliya, halkaasi oo uu uga shaqeynayay shirkadda maamusho dekedda Bosaaso ee DP World, kana ahaa maareyaha dekedda, iyadoo aakhirkiina halkaas lagu dilay shalay.
Previous: Wakiilka Somaliland ee dalka Kenya oo ka xog-waramay shirar uu la qaatay diblomaasiyiin ka tirsan dalalka Jarmalka iyo Finland
Next: Hargeysa: Waddo Isku Xidhaysa Xaafadda Dalloodho iyo Xabaalaha Baqiic oo la Dhagax-dhigay